I-Boeing's Aviall Imemezela Izivumelwano nabahlinzeki beMajor International
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Boeing's Aviall Imemezela Izivumelwano nabahlinzeki beMajor International
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba ZaseLuxembourg • Izindaba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba zase-Ukraine • I-USA Izindaba Ezintsha
IBoeing ngokusebenzisa inkampani engaphansi kwayo i-Aviall, imemezele ukuthi isayine izivumelwano ne-ANTONOV yase-Ukraine, i-International WaterGuard yaseCanada kanye neCargolux yaseLuxembourg.
IBoeing ngokusebenzisa inkampani yayo engaphansi kwe-Aviall, imemezele ukuthi isayine izivumelwano ne E-Ukraine I-ANTONOV, I-Canada International WaterGuard, kanye I-Luxembourg's ICargolux.
"Inethiwekhi yokwabiwa kwezinsizakalo emhlabeni wonke kaBoeing izohlinzeka ngosizo lwasendaweni nge-Aviall, okusiza ukufeza ama-oda ezindiza nokunikeza izinzuzo zezindleko kozakwethu embonini kanye namakhasimende ethu," kusho U-Eric Strafel, Umongameli we-Aviall kanye ne-CEO. "Siyakuthokozela ukuzethemba kozakwethu ekusizeni amakhasimende kuyo yonke imboni ye-aerospace ukuthi afeze izethembiso zawo."
Izivumelwano zanamuhla zisebenzela amakhasimende kahulumeni wezohwebo nawamazwe omhlaba.
E-Ukraine I-ANTONOV isayine isivumelwano no-Aviall, kufaka phakathi inhloso yokweseka ukukhiqizwa kohlelo lwabo olusha lwendiza, i-AN-1X8. I-Aviall izophatha ukuthengwa kokuthengwa kokuthengwa kokukhiqizwa kwe-ANTONOV, kufaka phakathi ukuhanjiswa kwempahla kanye nokudlulisela phambili imiqondo yesitoko, okusiza ukufeza ama-oda alolu hlelo lwendiza kanye nokuxhaswa okwengeziwe kwe-aftermarket.
I-International WaterGuard (IWG) isayine isivumelwano seminyaka eyishumi sokusabalalisa okukhethekile ne-Aviall yamapayipi amanzi ashisayo alingana nemikhumbi iBoeing 737, 747, 767 kanye neyi-777. CanadaI-IWG esekwe ineminyaka engaphezu kwengu-30 ihlinzeka ngezinsiza zamanzi asetshenziswayo embonini yezindiza.
UCargolux usayine isivumelwano sokuxhaswa kwezingxenye ze-Aviall. Leli lungiselelo livumela iCargolux ukuthi iqhubeke nokusebenzisa izimoto zayo ezingama-747-400F ngokuhlangabezana nezidingo zokungeniswa kwezinjini kuze kufike ekuvakasheni kwezitolo ezingama-33 zokulungisa izinjini ngokusebenzisa izindleko ezisebenza ngempumelelo.
I-Aviall isebenza njengenkampani ephethwe ngokuphelele i-The Boeing Company, isekela zombili amabhizinisi wezohwebo nezokuvikela ngaphakathi kwe-Boeing. I-Aviall ingumhlinzeki wezixazululo ohola phambili wezinsizakalo zokuphathwa kokuthengiswa kwempahla emakethe yezimboni zezindiza nezokuvikela. Ngeminye imininingwane, vakashela ku- www.aviall.com.
I-Airbus: Izindiza ezintsha ezingu-39,000, abashayeli bezindiza abasha abangu-550,000 abadingekayo...
I-EU yamukela iphilisi elisha le-Merck Lagevrito njenge-COVID-19…
QAPHELA: Indaba ye-United Airlines Untold ye-COVID-19 ...
Phuza iwayini eliningi. Siza Ukukhulisa Umnotho Wezwe
Umbiko waseNorton: Imikhonyovu yokusekelwa kweTech yiNombolo 1 ...
I-Israel ivala izivakashi ezivela emazweni ayisikhombisa aseningizimu...
Ukuhamba okuvinjelwe okuya eHawaii izinyanga ezimbili ezingeziwe
I-Airbnb: amadolobha ayi-11 ahamba phambili eLatin America e-US ...